Ngo yesimanje football ijubane ngokuvamile it has elilodwa lamanani ezibaluleke kakhulu. abaqeqeshi abaningi abadumile ozama ukuthola ithimba lakho umdlali abangakwazi ngokushesha zifakwe kuhlasela futhi okungenani ngokushesha emuva umusa, ukuze ayothola amabhola. Mhlawumbe yingakho footballer esheshayo - ukudluliswa esihlwabusayo kunoma club. Ake sixoxe abadlali, ngandlela-thile, kufanele isihloko esisheshayo football yesimanje.
Kwaphela isikhathi eside isihloko "the footballer sezitimela ezinejubane kakhulu emhlabeni" labetibambile isikhashana namanje umdlali, "Manchester United" futhi manje omunye abamqoka Madrid "Bangempela" Cristiano Ronaldo. I footballer esheshayo wazakhela isivinini efike 9,33 amamitha ngomzuzwana. Kwaba izinyawo zakhe okusheshayo, nge imiklamo esihle futhi umbono zasendle, wamlethela azithele ngabandayo ka omunye abadlali wezwe best. Hhayi ngisho kuwufanele umangale ukuthi abavikeli abakwazi ukuyeka lo mdlali okukhulu. Abanakukwazi nje ukuhambisana naye. Akubuzwa ukuthi indima eyadlalwa iqembu lo mdlali.
Arjen Robben - ngokuqinisekile ngeke umdlali esheshayo kodwa, nokho, layo 32,9 km / h ukwenza sezinzwa iyiphi welungelo Bundesliga. Ngeshwa, ukulimala unomphela ebusheni bakhe enganikanga ukuthi umdlali ukufinyelela amandla ayo egcwele isivinini, kodwa ngenye indlela manje isihloko "umdlali sezitimela ezinejubane kakhulu emhlabeni" ngabe ngelakhe.
Futhi manje ake sixoxe ngokuthi ubani akunjalo kudala wakunqoba embundwini isivinini esabekwa imikhumbi ezinezinyawo isiPutukezi, ngaphezu kwalokho, wakwenza ukuze mhlawumbe iminyaka eminingi, leli rekhodi izohlala ukuzamukela bonke abadlali emhlabeni. Teo Uolkot - abadlali sezitimela ezinejubane kakhulu emhlabeni, okuyinto, sibonga inqubekelaphambili izuzwe Isivinini ensimini 36,7 km / h, kwalotshwa Guinness Book of Records njengoba footballer esheshayo. abaqeqeshi abadumile Abaningi abakwazile ukuhlangana umdlali, ethi akunakwenzeka ukuba ayeke. Yini ngempela siyintando ngomunye wabaqeqeshi abadume kunabo bonke ngesikhathi sokugcina - Josep Guardiola, lapho ethi into nje ukuthi ungayeka Walcott - shot kusukela isibhamu. Ijubane Amazing umdlali emvumela ukundlula abavikeli ukuze bamane awuboni. amasu Omkhulu futhi ikhono ukunikeza ukudluliswa esihle kubalingani ukwenza Theo omunye wingers best football yesimanje. Futhi lapho ucabanga engu-athlete ke udinga ukuthi ucabange ukuthi lokhu akukhona irekhodi wokugcina ukuthi uthola. Futhi yeka umphumela ukuthi osekuzuziwe umdlali liyamangalisa, kulula ukuqonda uma siqhathanisa ngayo irekhodi emhlabeni emncintiswaneni wamamitha ayikhulu namashumi, okuyinto km 0.3 kuphela / h ngokushesha. Uma ucabanga ukuthi kungenzeka futhi kungafinyelelwa impumelelo okukhulu njengoba nomsubathi winger FC "Arsenal".
Ngakho siyabona ukuthi ibhola yesimanje akuyona emi namanje futhi ithuthukisa unyaka nonyaka. Impela, imishini kubaluleke kakhulu, ngakho-ke, lapho Yabuye bashintshe zibe ngcono, singase bezobona ukuzalwa nangomunye irekhodi, okuzokwenza adlula yi setha ngumuntu eyiNgisi abasha.
Tale mayelana nendlela flash ifoni